Ny antony maika hanamafisana ny haran-dranomasina dia nanosika ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fananganana ny vatohara, miaraka amin'ny fitomboan'ny tetikasa, fikarohana fikarohana ary fampiasam-bola. Na izany aza, ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina dia mbola eo am-piandohana, miaraka amin'ny tetikasa sy teknika maro mbola kely sy andrana. Satria mikatsaka ny hampiasa vola amin'ny asa famerenana amin'ny laoniny ny mpitantana, dia ilaina ny fandaminana amim-pitandremana mba hanatsarana ny vintana hahombiazan'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny drafitra ilaina dia ahitana ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana eo an-toerana, ireo mpandray anjara ary ireo mpanapa-kevitra mba hamaritana ny fomba, rahoviana, ary aiza no hanatontosana ny famerenana amin'ny laoniny, ary ny fomba ahafahany mameno - fa tsy manala - ny paikady momba ny fiarovana sy ny fitantanana ny haran-dranomasina.
Ny fandraisana anjara amin'ireo mpandray anjara manan-danja sy isan-karazany (ohatra, Tompon-tany sy vondron'olona vazimba teratany eo an-toerana, mpanapa-kevitra, sehatra tsy miankina) dia ampahany manan-danja amin'ny fandrindrana sy famolavolana ny ezaka famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ary tokony ampidirina amin'ny dingana tsirairay. Tena zava-dehibe ny fandraisana anjara toy izany mba hananganana fanohanana maharitra avy amin'ny vahoaka, hanomezana hery ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra samihafa sy ny mpandray anjara, hisorohana ny fifandirana, ary hampifandray ny hetsika fiarovana amin'ny tanjona ara-toekarena. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaosoratana sy asiana marikamanokatra fisie WORD (.doc) - manampy amin'ny fandraketana ny fizotrany, ny fampahalalana ary ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny dingana 1-4 amin'ny dingan'ny drafitra.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoModely momba ny drafitra asamanokatra fisie WORD (.doc) - azo ampiasaina hanefitra ny drafitra famerenana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny fampahalalana voafintina rehefa feno ny Workbook.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDingana 2 Tutorial sy ohatra fenomanokatra fisie EXCEL (.xlsx) - manolotra ohatra miasa momba ny fomba fanangonana, fanasokajiana ary famakafakana data mba hanampiana amin'ny fisafidianana ireo tranonkala ho an'ny famerenana amin'ny laoniny.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDingana 3 Fitaovana fanombanana ny fepetra fitsabahanamanokatra fisie EXCEL (.xlsx) - manampy amin'ny fanombanana ary avy eo misafidy safidy fanelanelanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOhatra momba ny fandalinana tranga & Boky asa ho an'ny tanjona fiarovana ny morontsiraka (.pdf) - manome ohatra feno amin'ny bokikely manazava amin'ny antsipiriany ny drafitra famerenana amin'ny laoniny ho fiarovana ny morontsiraka.
Tsidiho ny fampianarana an-tserasera:
Jereo ny Lesona 1: Fampidirana ny Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina sy ny fandrindrana ny tetikasa ho an'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny drafitra sy ny famolavolana tetikasa.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDiniho ny lesona 1